Global Voices teny Malagasy » Raha efa 100 andro izao ny governemanta ao Malezia no teo amin’ny fitondràna, mbola tandindonin-doza foana ve ny fahalalahana maneho hevitra? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Septambra 2018 5:45 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika (fr) i Emilie Canchon, avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, GV Mpisolovava
Mpikatroka mifamory mba hitondra fanohanana ho an'i Fadiah Nadwa Fikiri, ilay ramatoa mpisolovava sady mpikatroka nampanantsoin'ny polisy noho ny filazana azy ho nandefa lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy miantso fikomiana hanohitra ny fanjakàna. Sary teo amin'ny pejy Facebook -n'i Daniel Mizan Qayyum
Amin'izao fanatonany ny faha-100 andro naha-teo amin'ny fitondrana azy izao, nahatazona ny fanomezantokiny hiaro ny fahalalahana maneho hevitra ve ny governemanta vaovao ao Malezia ?
Ny 9 May 2018, resin'ny Pakatan Harapan (PH) ny Barisan Nasional (BN) izay efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny antsasaka taonjato iray.
Nandritra ny vanimpotoanan'ny fampielezankevitra, namoaka taratasy iray ny PH, nahafahana namerina nandalina sy, angamba koa, manafoana ireo fepetra manelingelina ny fahalalahana maneho hevitra, isan'izany ilay lalàna tamin'ny 1948 momba ny fikomiana, ilay lalàna tamin'ny 2015 ho fisorohana ny heloka bevava, ilay lalàna tamin'ny 1998 momba ny fifandraisana sy ny fampahalalambaovao maro rantsana sy ilay lalàna tamin'ity 2018 ity momba ny fanelezana vaovao tsy marina.
Hatramin'ny fifidianana, nahamarika fihatsaràna vitsivitsy ry zareo Maleziàna. Voabahana ny fahafahana miditra amin'ireo tranonkala tsy miankina sasantsasany mpizara vaovao, toy ny Sarawak Report sy ny Medium. Ny fanafoanana ny fandraràna an'ilay mpanao sariitatra sady mpikatroka politika, Zunar, tsy hivezivezy, mpitsikera fatratra ny praiminisitra teo aloha, Najib Razak. Na izany aza, mbola iharan'ny tsindry ihany ny sasany amin'ireo feo mahitsy fiteny.
Ramatoa iray mpisolovava voahelingelina noho ny fanoratany bilaogy momba ny fitondram-panjaka
Nampitandrina ny Ivontoerana ho an'ny Fanaovana Gazety Tsy Miankina (CIJ) hoe, na teo aza ireo fampanantenana nandritra ny fampielezankevitry ny PH, « mbola mitohy mitranga hatrany ny fanohintohinana ny fahalalahana maneho hevitra ».
Notanisain'ilay vondrona ny raharaha manjo an'ilay ramatoa mpisolovava sady mpikatroka, Fadiah Nadwa Fikri, izay, tamin'ny Jolay lasa teo, nahazo fampiantsoan'ny polisy noho ny fametrahany fanontaniana tao amin'ny bilaoginy momba ny anjara toeran'ny fitondram-panjaka ao anatin'ny fiainana politika. Lasibatry ny fanadihadiana iray izany izao i Fadiah, noho izy nandefa tety anaty aterineto ny votoaty iray lazaina fa miantso fikomiana.
Notoroan'ny CIJ hevitra ny polisy sy ny governemanta mba hampitsahatra ny fampiasàna ireo lalàna henjana, izay na ny parlemanta aza efa mihevitra ny hanafoana ireny fepetra ireny:
Angatahanay ny governemanta mba hilaza mazava ny toerana misy azy momba ny fahalalahana maneho hevitra ary hametraka malaky didy fampiatoana maharitra an'ireo lalàna famoretana rehetra, mandra-piandry ny fanafoanana sy/na fanitsiana azy ireny… Raha toa i Malezia tsy maintsy hametraka dingana demaokratika tena izy, dia tsy maintsy amporisihana sy arovana ny fifanakalozankevitra sy ny adihevitra mitondra fanakianana ary am-panajàna.
Niaro an'i Fadiah i Kua Kia Soong, mpanolotsaina ao amin'ny fikambanana Suaram, mpiaro ny zon'olombelona, ary niantso ny hisian'ny fandeferana manoloana ireo hevitra tsy mitovy:
Tsy azo adika ho fiantsoana fikomiana sy herisetra ny lahatsoratra navoakan'i Fadiah. Tsy nanao afa-tsy ny nanome ny heviny izy momba ny fanontaniana iray mahakasika ny tombontsoan'ny rehetra.
Tokony hajaina ny zony amin'ny maha-mpikatroka azy sy amin'ny maha-olona nahita fianarana azy satria izany no fitakian'ny fahamaroan-kevitra, ny fandeferana ary ny fisokafan-tsaina nirian'ireo ray sy reny mpanorina mba ho hita ato anatin'ny fiarahamonina demaokratikantsika, ary indrindra fa amin'izao fotoana izao, ho an'ilay lazaina fa « Malezia vaovao ».
Miangavy faharetana ireo manampahefana
Hanipa Maidin, minisitra lefitra ao amin'ny biraon'ny praiminisitra, dia nanamafy ny fampanantenan'ny PH hanafoana ireo lalàna mpamoritra, saingy mangataka faharetana, satria etsy ankilany ny governemanta miomana ny hanao fanavaozana betsaka amin'ny fitantanan-draharaha:
Antenaiko fotsiny fa mba haneho faharetana ny vahoaka manoloana anay, toy ny nanehoantsika faharetana nanoloana ny BN nandritra izay enimpolo taona lasa izay… Ny antony dia satria namela faharavàna betsaka ho anay sy ho anareo ny fitondrana teo aloha. Tsy fialàna bala izany saingy fangatahana amin'ny fo tsotra avy aty aminay.
Manampahefana iray hafa no nanamafy ny fanirian'ny governemanta hanafoana ireo lalàna miteraka resabe, toy ilay lalàna momba ny fanapariahana vaovao diso sy ilay momba ny fandikandalàna amin'ny resaka fiarovana (SOSMA).
Fisintonana ny fanenjehana an'ilay mpanao sariitatra, Zunar, ho niantso fikomiana
Noderain'ny rehetra ilay fanapahankevitry ny governemanta hisintona ireo fanenjehana sivy loha niampangàna an'ilay mpanao sariitatra politika, Zunar, ho nanao fiantsoana fikomiana. Zunar izy tenany mihitsy no nanamafy ilay vaovao tao amin'ny kaontiny Twitter :
— Zunar Cartoonist (@zunarkartunis) 31 juillet 2018 
AFAKA IHANY NONY FARANY !
Nosintonina daholo ireo fiampangana ahy ho niantso fikomiana (9 ny fitambarany). Mitondra vokatra ny « Ady atao amin'ny alàlan'ny sary ». Saingy tsy mbola mifarana ny tolona. Voan'ilay viriosy mampididoza « Dessin-O-Phobia » daholo izao ry zareo politisiana manerana ny tany tontolo.
Mpanao sariitatra malaza sy miely patrana i Zunar, izay nanakiana ny kolikoly sy ireo fanamparam-pahefana hafa nataon'ny governemanta teo aloha. Ary fanampin'ny fiampangàna azy ho niantso fikomiana, nogiazana ireo sary nataony sady noraràna izy tsy hivoaka ny firenena.
Nanamafy ihany koa ny polisy tao Penang fa ho averiny amin'i Zunar ireo antontam-boky, t-shirts sy sary fanehoana hafa izay nogiazany tamin'ny 2017.
Mitohy miatrika fahasahiranana goavana ry zareo Maleziàna no sady manao fanentanana mba hisian'ny fahalalahana bebe kokoa amin'ny fanehoana hevitra sy ny demaokrasia ao anatinà fiarahamonina iray mbola tena ao anatin'ny tetezamita ara-pitantanana. Mahavelom-bolo ny mahita hoe, hatreto, ny governemanta vaovao dia tsy nihemotra amin'ny fampanantenany hanohy ireo fanitsiana ny lalàna hanamafy ny fahalalahan'ireo mpampahalala vaovao sy ny fiarovana ny zon'olombelona.
Saingy, mitombo isa ireo teratany maleziàna sy vondrona fiarahamonina sivily mampahatsiahy amin'ny governemanta ny tokony handraisany fepetra matotra. Izany ihany koa no hafatra nampitain'ìreo vondrona miisa 36 avy amin'ny fiarahamonina sivily nanao sonia ny fanambaràna nitakiana ny tsy fikitihana ny fahalalahana maneho hevitra.
Antenainay ity governemanta vaovao ity mba ho tena vaovao tokoa ary hanamafy izay nolazainy amin'ny alàlan'ny asa hentitra sy matotra. Raha toa ny governemanta, amin'izao andro voalohany tena saropady misy azy izao, manome ny feo ho an'ny fitantanany, izahay kosa manantena ny fanapahana tanteraka ny fifamatorana amin'ireo famoretana tany aloha sy hisian'ny tetezamita iray hankany aminà Malezia iray izay ahafahana miresaka am-pilaminana ny hevitra rehetra, sy isitrahana feno ny zo nomen'ny lalam-panorenana ho antsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/12/125996/
 31 juillet 2018: https://twitter.com/zunarkartunis/status/1024221202636726272?ref_src=twsrc%5Etfw